Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Garoowe ku qaabilay Boqor Burhaan Boqor Muuse | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Garoowe ku qaabilay Boqor Burhaan Boqor Muuse
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10-6-2015 xafiiskiisa madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe ku soo dhaweeyey Boqor Burhaan Boqor Muuse oo bilihii u dambeeyey safaro ku marayey dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Wefdi uu hogaamineyey Boqor Burhaan Boqor Muuse kana soo ambabaxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa si diiran waxaa loogu soo dhaweeyey magaalada Garoowe, isagoona ay soo dhaweyntiisa ka qeyb-qaateen waxgarad iyo masuuliyiin kale duwan.
Soo dhaweyn kadib ayaa Boqorka waxaa loo soo gudbiyey aqalka Madaxtooyad dawladda Puntland, waxaana halkaas si wanaagsan ugu soo dhaweeyey Madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu si aad ah ugu faraxsanyahay soo laabashada Boqor Burhaan Boqor Muuse ee gudaha Puntland , kuna amaanay guulihii uu ka soo gaaray kulamadii uu la qaatay waxgaradkii iyo bulshadii uu dalka dibadiisa iyo gudhiisa kula kulmay.
Boqor Burhaan ayaa isna dhankiisa Madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyey sidii wanaagsanaa ee ay meelkasta ugu soo dhaweynayeen intii uu ku gudajiray safarkii uu dalka gudhiisa iyo dibadiisa ku mareyey.
Boqorka ayaa booqashooyinkii uu ku marayey dalka dibadiisa ku soo geba-gebeeyey dalka South Africa oo ay kajirto dhibaatooyin lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan , waxaana uu kulamo la qaatay madax dhaqameedka dalkaas isagoona kula dardaarmay inaan la dhibaateyn Soomaalida .